Siyaasi ku geeriyooday Britain - BBC News Somali
Siyaasi ku geeriyooday Britain
Hogaamiyihii hore ee xisbiga Liberal Democrats, Charles Kennedy ayaa ku geeriyooday gurigiisa, waxayna da'diisu aheyd 55 sanadood.
Qoyskiisa ayaa sheegay in ay aad uga xumaadeen geerida ninkaas wanaagsan oo ahaa aabe fiican. Sababta uu u geeriyooday Mr. Kennedy lama sheegin, hase ahaatee, boliisku waxay sheegeen in aysan jirin wax shaki ah oo la xiriira geeridiisa.
Nick Clegg oo bishii hore iska casilay xilka hogaaminta xisiba Liberal Democrats ayaa sheegay in ...''Mr. Kenneday faryaradiisa xirfada siyaasadeed ee ku jirta in ay ka badan tahay xirfada xirfada siyasadeed ee dhamaan siyaayiinta kale oo la isku daray.''
Waxuu intaa ku daray Mr. Kennedy in uu naftiisa u hibeeyay u adeegida bulshada, intaana waxaa u dheereed in u hibo u lahaa ka hadlida siyaasadda oo lagu daro kaftan taasoo dadka si weyn u taaban jirtay oo xitaa gaari jirtay heer ka baxsan caalamka siyaasadda .
Dhamaan siyaasiyiinta dalka oo uu ka mid yahay ra'iiwal wasaaraha Britain David Cameron ayaa si weyn uga hadlay siyaasigaa geeriyooday iyo wax qabadkiisa.